टी–१० लिगः आज पनि पारस बेन्चमै ! - Everest Dainik - News from Nepal
टी–१० लिगः आज पनि पारस बेन्चमै !
काठमाडौंः यूएईमा जारी टी–१० लिग अन्तर्गत बंगला टाइगर्स विरुद्धको खेलमा पनि नेपाली क्रिकेट टिमका पूवकप्तान पारस खड्का प्लेइङ ११ मा अटाउन असफल भएका छन् । पारस टिम आबुधाबीमा आवद्ध छन् ।
सुरुवातका २ खेलमा प्लेइङ ११ मा अटाउन सफल भएका पारस पछिल्ला २ खेलमा भने बेन्चमै बसेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस टी–१० लिगः कलन्दर्सविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै वाट्सनको टिम
बंगला टाइगर्सविरुद्ध आबुधाबीले २ खेलाडी परिवर्तन गरेको छ । उसले निरोशन डिकवेला र वेन म्याडेसनलाई विश्राम दिएर अभिश्का फर्नान्डो र हेडेन वाल्शलाई प्लेइङ ११ मा समावेश गरेको छ ।
आज पनि आबुधाबीले टस जितेर बलिङ रोजेको छ ।
सोमबार पारसबिनै मैदान उत्रिएको टिम आवुधाबी मराठा अरबियन्सविरुद्ध २४ रनले पराजित भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस टी–१० लिगः मलिंगाको टिमसँग पारसआवद्ध आबुधाबी पराजित
टी–२० क्रिकेटमा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकै आधारमा पारसलाई आबुधाबीले टी–१० लिगमा छनोट गरेकाे हाे । तर, ब्याटिङ अर्डरमा छैठौँ नम्बरमा रहेकै कारण उनले यसअघिका दुई खेलमा मात्र ४ रन मात्र जोडेका छन् ।
दुवै खेलमा नटआउट रहेका पारसले राम्रो खेल देखाउने अवसर त पाएका छैनन् नै, नराम्रो प्रदर्शन पनि छैनन् ।
जारी लिगमा पारस १० हजार अमेरिकी डलरमा टिम आवुधाबीले अनुबन्ध गरेकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेटमा केही महिनाअघि पारसले शानदार सतक बनाएपछि टी–१० मा अनुबन्धित भएका थिए।
ट्याग्स: टी-१० क्रिकेट लिग, बंगला टाइगर्स भर्सेस टिम आबुधाबी